» Al-Shabaab oo weerar qasaaro gaystay ku qaaday ciidamada Itoobiya ee kusugan Qansax-dheere
Al-Shabaab oo weerar qasaaro gaystay ku qaaday ciidamada Itoobiya ee kusugan Qansax-dheere
December 5, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareCiidamada Al-Shabaab ayaa weerar gaystay qasaarooyin kala duwan ku qaaday ciidamo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan kusugnaa meel an ka dheereyn deegaanka Qansax-dheere ee gobolka Bay.
Weerarkan oo ahaa mid gaadmo ah ayay Shabaab ku qaadeen Kolonyo Gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowalda.
Inkastoo an la ogayn inta uu la egyahay qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas hadana Sargal uhadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in gaadiid dagaal ay ka gubeen ciidamada Itoobiya.
“Dagaalkaas waxaan ku qaadnay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo Amisom ah, saraakiil kua maamulka gobolka Bay ah ayaa wehlinaysay, waxaana gaarsiinay qasaaro, tangina waan k gubnay|”ayuu sheegay Abuu Ayman oo Shabaab uqaabilsan gobollada Bay iyo Bakool.
Dagaallo kale ayaa isla gobolkas ku dhexmaray Shabaab iyo ciidamada dowlada, waxaana xariiro aan la samaynaysa Saraakiisha Gobolkaas ay ka gabsadeen in ay ka hadlaan dagaaladaas.
6 Responses to Al-Shabaab oo weerar qasaaro gaystay ku qaaday ciidamada Itoobiya ee kusugan Qansax-dheere
Wanagsane says:	December 5, 2012 at 01:31	Waa beenteed alshaab
Reply	Abu bakar says:	December 5, 2012 at 06:16	Allhu ilahow kufarta iyo murtadiinta
Reply	Manta says:	December 5, 2012 at 10:01	Allahu akbar mujahidiinta guuuuuuuuuuuuuuuuuul inshaallah dalka dhamaan waakasaraynaa
Reply	Run sheg says:	December 5, 2012 at 15:08	Waxaa su.al la is waydiinaya ciidamada shisheye iyo dhaqalahoda maxay ugu dhamanayan dhgoda malkoda iyo hubkoda lakin waxaa xaqiiqo ah ethioqian iyo amison in dhib wayn ku haysto hadi an dhib ku qabi lahayn bay iyo bkol way kawada sari lahaayen nin ba i shegey ben ayan u haystay in ay ku dhamaden etioqian o way fashilmen mar 2 ad mida kale qasax dhere way gari la .yhin dhinca bladwayne bulo burde way iman la yhin tas aya u dalil ah mida kale dawlad muslim ah o madax ka ah nin dhahayo nin nin wu gusankara laga bilabo wa ncy dawlada xasan insha.alah xaly madxtoyada aya lagu so weraray gul alaha siyo mujahidina galo rac iyo galna alaha jabiyo wax kale ayey so wadan beri jawari aya rabo inu u gudbiyo madaxwayne xasan nin nin wu gursan dona yah wale waxad so wadan iyo wbiga ya wayn lakin ale aya idinka wayn ma dhcyso dhaqan umalaha somalia cdona uma laha
Reply	Suleman ahmed says:	December 5, 2012 at 16:41	Allow kufaarta baabi allaahow dunidan adaa xakumee daleyna gaalada kasaar
Reply	Daudi dada says:	December 5, 2012 at 21:41	Qansaxdhere yaa garineya xage ku taala